Naterina ho amin’ny toerana hialàny sasatra ny taolambalon’ireo Olona Voalohany tao Trinité sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Efa 125-1395 taorian'i Kristy tany ho any ireto taolambalo ireto
Voadika ny 12 Janoary 2020 15:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, русский, Español, English
Fitsidihana ireo olona Sorinamey Lokono (Arawaks) tao amin'ilay lanonana fanitrihana indray ireo taolambalon'ny Olona Voalohany tao amin'ny Trano Mena, tany amin'ny Seranan'i Espaina, Trinidad, 19 Oktôbra 2019. Sary an'i Maria Nunes, nahazoana alàlana
Rehefa natomboka tamin'ny 2013 ny asa fanarenana ny Red House (Trano Mena) — foiben'ny antenimieran'ny firenena talohan'ny tsy nikarakaràna intsony ilay tranobe — 60 tany ho any ny taolambalon'ireo Tainos, indizeny tanosy, no hitan'ireo mpiasa mpanao fanorenana. Nandritra ilay lanonana fanitrihana indray izay efa nandrasana hatry ny ela, ary notontosaina ny 19 Oktôbra 2019, dia naverina niala sasatra indray ny taolambalon'izy ireo.
Olona Vaolohany no nahazatra niantsoana ireo olona indizeny tao Trinidad sy Tobago, fiteny iray izay sady niantsoana ireo mponina voalohany tao amin'ilay nosy talohan'ny nahatongavan'i Christopher Columbus sy ilay sambony novatsian'i Espaina. Fony voalohany hita ireo taolambalo ireo, natsahatra aloha ny asa fanarenana ny Trano Mena mba hahafahana manao fikarohana arkeôlôjika feno. Tamin'ny farany dia nohamafisina fa ireo taolambalo ireo dia anà razambe miisa 60 eo ho eo, ninoana ho 47 ny olondehibe ary 13 ny ankizy. Ireo fanadihadiana lalina — izay nampiasàna hatramin'ny radiocarbon mba hamaritana ny vanimpotoana — dia namoaka fa novinavinaina ho tany anelanelan'ny 125 sy 1395 taorian'i Kristy no niaina ireny razambe ireny.
Ireo taolambalo sy asakanton'ireo razambe Amerindiàna 60, izay naverina nalevina indray nandritra ilay lanonana tao amin'ny Seranan'i Espaina, Trinidad, 19 Oktôbra 2019. Sary an'i Maria Nunes, nahazoana alàlana.
Tena nanandanja ity fanambaràna ity ho an'i Maria Nunes mpakasary, izay nandrakitra an-tsary ilay fanitrihana indray. Tao anaty fanavaozambaovaon'ny Facebook-ny, hoy izy nanamarika:
[N]y taolambalon'ireo olona talohan'i Christopher Columbus […] Ambaran'io amintsika fa ny ankehitriny, ny tanàna renivohitsika eo amin'ny Seranan'i Espaina, dia toerana iray an'ny vondrom-piarahamonin'ny zanak'olombelona efa ho 1.500 taona talohan'ny nidiran'ny Espaniôla voalohany teto tamin'ny 1492.
Izany tokoa, nohamafisin'ilay fahitàna fa nandritra ny 1.000 taona mahery, niroborobo ny fiainana sy ny fonenana tao amin'ny Seranan'i Espaina, ilay renivohitry ny firenena amin'izao fotoana izao.
Ho an'ny vondrompiarahamonin'ireo Olona Voalohany, fahazoana indray ampahany manandanja tamin'ny tantaran'ny lasany iny. Tao amin'ilay lanonana fanitrihana indray, ny Lehiben'ireo Olona Voalohany ao San­ta Rosa, Ricardo Bharath-Hernandez, niteny hoe fomba iray iny hiresahan'ireo razambe amin-dry zareo ary fotoana iray hankalazàna araka ny tokony ho izy ny fahatsiarovana ny fahafatesan-dry zareo:
Ny sasany mety hahita hoe zavatra tsy misy ilàna azy iny lanonana iny, na tsy manandanja sy tsy misy dikany. Saingy toy ny fitondran'ny ankamaroantsika ny maty ao amintsika ihany, anaty fanajàna sy ampiasàna izay fombafomba mifanaraka amin'ny fombandrazan'ny tsirairay manokana, dia resy lahatra tanteraka izahay fa tokony homena haja ireo razambenay ary entina mifanaraka amin'izany fomba izany.
Ny filoha Ricardo Bharath-Hernandez, tao amin'ny Trano Mena ao amin'ny Seranan'i Espaina, mitarika fomba masina ho fametrahana ireo taolambalon'ny Olona Voalohany, 19 Oktôbra 2019. Sary an'i Maria Nunes, nahazoana alàlana.
Momba ilay lanonana ihany aza, dia nilaza izy hoe tena nisy dikany ilay izy, tsy hoe fotsiny noho izy iny nahafahan'ireo taolambalo niverina napetraka tany amin'ny toerana nahitàna azy ireo, fa noho izy iny niasa ho toy ny fotoana iray hampisehoana masoandro ny tolona ataon'ny vondrompiarahamonin'ireo Olona Voalohany, izay matetika no tsy ekena sy tsy hajaina araka izay mendrika azy.
Tonga nanatrika ilay fanitrihana indray ireo olona avy amin'ny vondrompiarahamonin'ny Olona Volohany ao an-toerana, hatramin'ny solontenan'ireo Tainos avy any amin'ireo faritany hafa ao Karaiba, Amerika Atsimo sy Afovoany, nahitàna an'i Dominika, Goatemalà, Goiana, Sorinama ary Venezoelà. Nanotrona ihany koa an'ilay lanonana ireo solontenan'ny governemanta sy ny media.
Mpikambana iray avy amin'ny tarik'ireo Sorinamey Lôkônô tonga nitsidika, mitsoka sodina tao amin'ilay lanonam-pandevenana tamin'ny 19 Oktôbra 2019 tao amin'ny Seranan'i Espaina. Sary an'i Maria Nunes, nahazoana alàlana.
Tao anaty seho iray nivantana tamin'ny Facebook momba ilay hetsika, nalefan'i Rhoda Bharath, mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo, miharihary fa nitàna toerana be tao anatin'ilay lanonana ny taranak'ireo Olona Voalohany. Nantsoin'ny Lehiben-dry zareo ireo “Fanahy Lehibe” mba hitari-dàlana sy hanamasina ny toerana nametrahana ireo taolambalo, ary taorian'izany ireo solontena tsirairay dia samy nanao ny antsony na ny fanatitra ho an'ny maty. Hita tao anatin'ireo fombafomba ny hira, mazàna arahan'ny zavamanenon'ireo indizeny, toy ny shak shak, amponga sy sodina. Mpikambana samihafa avy amin'ilay vondrompiarahamonina no naneho ny fombafomban-dry zareo manokana sy nanao fanatitra talohan'ny nandevenana ireo taolambalo.
Marobe ireo mpisera amin'ny aterineto voahetsik'ilay lanonana, izay hitan-dry zareo ho toy ny fotoana iray manantantara eo amin'ny tantaran'ny fireneny no sady vintana iray hanehoana fanajàna ny taranak'ireo olona indizeny ao amin'ny nosy.
Tondraky ny “Tia” sy ny fanehoankevitra milaza ny fihetsehampon'ireo mpanatrika ireo lahatsoratra miaty sary sy lahatsary avy amin'ilay lanonana aty anaty tambajotra sôsialy:
Marobe ireo mpampiasa aterineto no tsy naharaka hoe hita nandritra ny fanavaozana ny Trano Mena ny taolambalon'ireo razamben'ny indizeny Olona Voalohany tao Trinidad – io no antony naha-ela azy. Nalevina androany ny taolambalon-dry zareo. Tena nanohina ny fo.
— Kris⭐️ (@KrisClarkie) 19 Oktôbra 2019
Dale Orosco, mpampiasa Facebook no sady taranak'ireo Olona Voalohany, nanampy hoe:
Rehefa mijery ireny sary ireny dia toa mahatsapa fihetsehampo tsy hay faritana amin-teny, eritreritra an'ireo razambeko efa nodimandry elabe tany aloha tany, ireo tantara nampitain'i dadabe momba ireo razambeny izay isika [.] Mankarary ny foko izany, sady manome ahy ihany koa ny fahatsapàna ho afapo fa hoe nahita fitsaharana ihany ireo olontsika izay voahelingelina tamin'ny torimasony.
Ny endrika natolotra ho an'ilay tsangambato ho an'ireo Olona Voalohany tao amin'ny firenena, napetraka eo amin'ilay toerana. Sary an'i Maria Nunes, nahazoana alàlana
Fayola Rudder nizara fihetsehampo mitovitovy amin'izany:
Ela ny ela, fanajàna ireo olona voalohany izay teo an-tsorony isika no niankina […]
Nisaoran'ny filohany, Hernandez, ny governemanta tamin'ny nanatanterahany ny fampanantenàny hitahiry ireo taolambalo ao anatin'ny Trano Mena, sy hanokana ilay tsangambato natao ho an'ireo vazimba teratany ao Trinidad sy Tobago teo amin'ilay toerana.
Nanambara ihany koa izy fa mety handresy lahatra ny hametrahana andro iray tsy fiasana isantaona izy sy ny vondrompiarahamonin'ireo Olona Voalohany, mba ho fanomezana voninahitra ireo Olona Voalohany. Na nanohitra an'izay aza tany am-boalohany noho ny efa hamaroan'ireo andro tsy fiasàna ao Trinidad sy Tobago, nilaza izy fa nivoatra ilay vondrompiarahamonina — sy ny fomba fijeriny ny raharaha.